शेर्पा समुदायभित्र महिलाको स्थान ! - Shikhar Post Shikhar Post
शेर्पा समुदायभित्र महिलाको स्थान !
नेपाल विविधताले भरिएको देश हो । यही विविधताभित्र हिमाली समुदायको बसोवास छ । हिमाल आफैँमा अर्को विविधताको नाम हो । २५०० मिटरभन्दा हिमाली भेगमा शेर्पाहरू बसोवास गर्छन् । यहाँको सामाजिक बनोट नेपालको अन्य समुदायको भन्दा भिन्न छ । अन्य समुदायको तुलनामा शेर्पा समुदाय प्रजातान्त्रिक छ । शेर्पा समुदायभित्र महिलाको स्थान पनि अन्य समुदायको भन्दा राम्रो छ ।
देशमा भएका अनेकौँ राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनले समाजको दृष्टिकोणलाई नयाँ मान्यताअनुसार परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ । महिलाहरूको अवस्थामा पनि हिजोको तुलनामा गुणात्मक परिवर्तन भएको हामी देख्छौँ । समाजमा वर्ग सुरु भएसँगै महिलालाई कम अधिकार दिइयो । इतिहासमा पटक–पटक भएको आन्दोलनले महिलामाथिको विभेद कम गर्दै लगेको छ । नेपालको सन्दर्भमा महिलामाथि गरिने दृष्टिकोणमा विगतभन्दा गुणात्मक परिवर्तन भएको छ ।
नेपालको भौगोलिक वनोटअनुसार सामाजिक अवस्थाको निर्माण भयो । विभिन्न समुदायको आ–आफ्नै सामाजिक परिवेश छ । खासगरी खस आर्य र गैरखस आर्य समुदायका महिलाबीच समाजमा हेरिने दृष्टिकोण फरक छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरूमा राजनीतिक चेतना कम भए पनि उनीहरू घरभित्र खस आर्य समुदायको महिलाको तुलनामा स्वतन्त्र छन् । जनजातिभित्र पनि शेर्पा समुदायभित्रको महिलाको अवस्था अझै फरक छ । शेर्पा समुदायको महिलालाई घरको मूली राख्ने चलन आजका दिनसम्म पनि कायम छ । यो कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन वा महिलावादी आन्दोलनले स्थापित गरेको मूल्य मान्यता होइन । शेर्पा समुदायको सामाजिक बनोट नै महिलामैत्री भएकाले यो सम्भव भएको हो ।
शेर्पा समुदायको महिलालाई घरपरिवार सञ्चालन गर्ने विशेष सामाजिक अधिकार नै हुन्छ । शेर्पा महिलाहरूको बिहेअघि भन्दा बिहेपछि अझै मजबुत सामाजिक पारिवारिक हैसियत हुन्छ । पुरुषहरू महिलाको सहायकका रूपमा मात्रै रहन्छन् । घरभित्रको आर्थिक व्यवस्थापनदेखि घरबाहिरको हरेक कार्यमा महिलाको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । शेर्पा महिला निरक्षर नै किन नहोस् घरमा उनको निर्णय र निर्देशन नै अन्तिम हुन्छ । अन्य समुदायका महिलाभन्दा स्वतन्त्र रहेका कारण नै उनीहरू हरेक काम गर्न पछि पर्दैनन् ।
शेर्पा समुदायमा पुरुष महिलाको सहायकका रूपमा मात्रै रहन्छन् । घरभित्रको आर्थिक व्यवस्थापनदेखि घरबाहिरको हरेक कार्यमा महिलाको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।
शेर्पा महिलाहरूमा ठाउँ भौगोलिक विकटताका कारण उनीहरू उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्छन् । यदि शेर्पा महिलाले उच्च शिक्षा पाउने हो भने देशको जुनसुकै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छन् । शेर्पा महिलाहरूको निर्णय क्षमता उच्च भएकै कारण शेर्पा समुदायको आर्थिक स्थिति मजबुत छ । महिलाहरूको अनुमतिविना पुरुषहरूले केही गर्न पाउँदैनन् ।
राजनीतिक रूपमा पनि शेर्पा महिला अन्य समुदायको तुलनामा सबल देखिन्छन् । पुरुषकै छत्रछायामा महिला दबिनुपर्ने अवस्था शेर्पा महिलामा छैन । महिलाको सामाजिक हैसियत कमजोर भएपछि विभिन्न किसिमका महिला हिंसा हुने हो । शेर्पा समुदायमा महिलाको हैसियत माथि भएका कारण महिला हिंसा अत्यन्त न्यून छ ।
दाइजोको नाममा होस् वा छोरी जन्माएको बहानामा नेपालका अन्य क्षेत्र समुदायमा अनगिन्ती हिंसा भएको देखिन्छ । तर, शेर्पा समुदायका महिलामा महिला भएकै कारण विभेद भोग्नुपर्ने सामाजिक चलन छैन । शेर्पा महिलाहरू आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रमा अघि बढ्दै छन् । सेना, प्रहरी र निजामती सेवामा समेत शेर्पा महिलाहरूको उपस्थिति शेर्पा पुरुषको तुलनामा अघि बढ्न थालेको छ । महिलाहरू स्वतन्त्र भन्नुको अर्थ पुरुषलाई हेप्छन् भन्ने पटक्कै होइन । शेर्पा महिलाहरू पुरुषलाई हेप्दैनन्, बरु मिलेर काम गर्छन् ।
प्रकाशित मिति : शनिबार, २४ फाल्गुन २०७६ १२:२०